ငါပြောချင်တဲ့ မြန်မာတွေအကြောင်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ငါပြောချင်တဲ့ မြန်မာတွေအကြောင်း
Posted by phone_kyaw on Jun 14, 2012 in Copy/Paste | 18 comments
အော်….မြန်မာအစိုးရ မြန်မာအစိုးရ…တော်တော်လည်း တက်နိုင်တယ်။ ရခီးနဲ့ ခေါတော ကုလားတွေ သတ်ကြ မီးရှို့ တဲ့အခါကြတော့ ရာဘာကျည်ဆံနဲ့ ပစ်တဲ့။ ကျနော်တို့ ဘုန်းကြီးတွေ ကျောင်းသားတွေကြတော့ ရိုက်လိုက် ပစ်လိုက်တာများ ဘုန်းကြီးတွေ သင်္ကန်းတောင်မနိုင်ဘူး။ ခွေပြေးဝက်ပြေးပဲ။ ဒီဘုန်းကြီးတွေကလည်း သူတို့ အလုပ်က ဘာသာရေးကို ဘာ့ကြောင့်များနိုင်ငံရေးလုပ်ချ
င်ရတာလဲမသိဘူး။ လူထွက်ပြီးတော့ လုပ်ပေါ့။ တကယ်လုပ်ချင်ရင်ပြောတာပါ။ နိုင်ငံခြားက ခရစ်ယာန်ဘုန်းကြီး၊ မွတ်စလင်ဘုန်းကြီးတွေ နိုင်ငံရေးလုပ်တာလည်းမတွေ့ မိပါဘူး။ သူတို့ က ဗလီနဲ့ ဘုရားရှစ်ခိုးကျောင်းမှာပဲ ခပ်တည်တည်နဲ့ အာတာပဲ တွေ့ ဘူးပါတယ်။
ဟိုမှာ ခေါ်တော ကုလားက ရွာတွေမီးရှို့ တာကြတော့ သေနတ်နဲ့ မပစ်ရဲဘူး။ ကောင်းတယ်ဗျာ။ ဒါမှ အစိုးရပီသတယ်လို့ ပြောရမလိုပဲ။ နောက်ကြရင် မြန်မာတွေ ဆန္ဒမပြနဲ့ မီးရှို့ ကြလို့ အကြံပေးချင်တယ်။ ဒါဆိုရင် အစိုးရက သေနတ်နဲ့ မပစ်ဘူး။ ဆန္ဒပြရင် ပစ်မယ်။
အခု ကုလားနဲ့ ရခီး မောသွားလို့ ငြိမ်နေတာလားမသိဘူး။ ရှို့ စရာမရှိတော့လို့ လား။ ကျနော့်ဆန္ဒကတော့ မငြိမ်စေချင်ဘူး။ ထပ်ပြီး ချ စေချင်တယ်။ ဘာဖြစ်လို့ လဲဆိုတော့ အကုန်သေးသွားလည်းအေးတာပဲ။ ဘာသာရေးအဓိကရုန်း လူမျိုးရေး အဓိကရုန်းကို ကျနော်တို့ နိုင်ငံရေးသမားတွေက အားမပေးဘူး ဘာညာ ရွှီးနေတဲ့ လူလေးမိုးသီးဇွန်တို့ ၊ စောက်ဖြစ်မရှိတဲ့ အန်အယ်ဒီတို့ သတိထားဖို့ က အဲဒါ လူမျိုးရေး ဘာသာရေးနဲ့ မဆိုင်ဘူး။
ဘာနဲ့ ဆိုင်တာလဲဆိုတော့ ဒီစောက်ကုလားက နယ်လုချင်တာနဲ့ ဆိုင်တယ်။ စာမတတ်တဲ့ကုလားကို စာနဲနဲတတ်တဲ့ ကုလားခေါင်းဆောင်က နိုင်ငံခြားကနေ ကြပ်ပေးတယ်။ အကြပ်ခံရတာကို အကြပ်ခံရမှန်းမသိတဲ့ ဘူးသီးတောင် မောင်တောက တောသားတွေက ထ ချ တော့ နောက်ဆုံးသူတို့ ပဲပြေးရတယ်မဟုတ်ဘူးလား။
ဘယ်သူနစ်နာလဲဆိုတော့ နယ်မြေလိုချင်တဲ့ လူတွေပဲ နယ်မြေတွေကိုစွန့် ခွာပြေးရပြီမဟုတ်ဘူးလား။ ကိုယ်ပဲ ဒုက္ခရောက်တယ်။ ရိုဟင်ဂျာအရေးဆိုနေတဲ့ ခေါင်းဆောင်တိုင်းက ဗမာခေါင်းဆောင်တွေ ရခီးခေါင်းဆောင်တွေလိုပဲ။ လေပဲရှိတယ်။ ကြပ်ပေးတယ်။ မျှောက်ပေးတယ်။ သူတို့ မျှောက်ပေးတိုင်း ဂွေး တတ်အောင်ကတဲ့သူတွေပဲ နောက်ဆုံးနစ်နာရတယ်။ ခေါင်းဆောင်ကတော့ သိတဲ့အတိုင်း လေ ချွန်မပြတ်ဘူး။
ကျနော်စာထဲမှာ ကုလားနဲ့ ရခီးဆိုပြီး သုံးနှုံးထားတယ်။ ဒါနဲ့ ပတ်သတ်ပြီးအီးမေးပို့ လာကြတယ်။ ကုးလားကော ရခီးကော။ ပြန်ပြင်တဲ့။ သူတို့ ကိုနှိမ်တယ်….မဟာဗမာလူမျိုးကြီး ဘာညာဆိုပြီး ဆဲတယ်။ ငယ်ငယ်လေးကတည်းက ကုလားနဲ့ ရခီးလို့ခေါ်လာခဲ့တာပဲ။ ပါးစပ်က အကျင့်ပါနေပြီ။ မပြင်နိုင်ဘူးဟေ့…။ ကိုယ့်ပါးစပ်နဲ့ ကိုယ်ပြောတာကိုများ မဟာဗမာလူမျိုးကြီးတို့ ဘာတို့ ဖြစ်ရသေးတယ်။ စောက်ရှုးတွေလိုပဲ။ ခင်ဗျားတို့ ပြောနေတဲ့ မဟာဗမာလူမျိုးကြီးဆိုတဲ့စကားလုံးကို ကုလားနဲ့ တရုတ်ကိုသွားပြောကြည့်ပါလား။ သူတို့ တွေ ကလိမထိုးပဲ ရယ်(ရီ)လိမ့်မယ်။ သူတို့ လူမျိုးကမှ သန်းသုံးထောင်လောက်ရှိတော့မယ်။ အဲဒိကြားထဲမှာ မြန်မာနိုင်ငံက ဗမာလူမျိုးစစ်စစ်က သန်းသုံးဆယ်တောင်မရှိတော့ဘူး။ ဒါနဲ့ များ မဟာဗမာ လူမျိုးကြီးဆိုပြီး လျှောက်ပြောချင်နေသေးတယ်။
တိုင်းရင်းသားတွေသတိထား။ ကိုယ်အသုံးမကျတိုင်း ဗမာ ဗမာ ဆိုပြီး မရမ်းနဲ့ ။ ဒါပဲ။
မီဒီယာတွေက သူတို့ အလုပ်ကို မလုပ်ပဲ မဆီမဆိုင် ကုလားနဲ့ ရခီးအရေးမှာ ၀င်ပြီး နိုင်ငံရေးပါတီတွေလို ကြေငြာချက်ထုတ်ရတယ်လို့ ဗျာ။ တလွဲပဲ။ ခင်ဗျားတို့ အလုပ်က သတင်းကောင်းကောင်းကို ပြည်သူ့ ကို တင်ပြဖို့ လေ။ ကြေငြာချက်နဲ့ ဘာဆိုင်လို့ လဲ။ ခံစားချက်နဲ့ လည်းတခြားစီ။ အခုကြတော့ ဦးသိန်းစိန်ရဲ့ မယားပါ သားလိုဖြစ်နေလားလို့ ။ အီလဲဗန်း မီဒီယာဂရုက လက်ဝှေ့ သမားရုပ်နဲ့ စီအီးအိုကြီးလုပ်နေတဲ့ပုံစံက သတင်းထောက်နဲ့ မတူပဲ နိုင်ငံတော်သမ္မတနဲ့ တူသလားပဲ။ ကြည့်လည်းလုပ်ပါအုံး ဆရာသမားတို့့ရယ်။
အခုတစ်လော အန်အယ်ဒီက အမတ်တွေ ရောင်းကောင်းနေတယ်။ နိုင်ငံခြားကိုလည်း သွားရတယ်။ မ၀တ်ဘူးတာ ၀တ်ရတယ်။ မစားဘူးတာ စားရတယ်။ သူတို့ တွေကိုကြည့်ရတာအားကျလိုက်တာဗျာ။ ဘာအလုပ်မှ ပင်ပင်ပန်းပန်းမလုပ်ရပဲ လွှတ်တော်အမတ်ဆိုတဲ့ လစာလေးလည်းရ…ရာထူးလေးရ…ကိုယ်ဝန်လေးလည်း ရလို့ ပြောရမလိုပဲ။
မေ့နေမှာစိုးလို့ပြောရအုံးမယ်။ နေပြည်တော်က မဲဆန္ဒနယ်လေးခုက ပြည်သူတွေကပြောတယ်။ ငါတို့ မဲထည့်လိုက်တဲ့လူတွေအကုန်လုံးက ငါတို့ နယ်မှာနေတာမဟုတ်ဘူးတဲ့။ သူတို့ က ရန်ကုန်မှာနေတာဆိုတော့ ငါတို့ မြင်ချင် ပြောချင်ရင် ရန်ကုန်ကိုသွားရမယ်တဲ့ဗျာ။ သူတို့ အားကိုးလို့ မဲပေးလိုက်တဲ့လူတွေအကုန်လုံးက အခုတော့ သူတို့ ကို မေ့သွားပြီဆိုပြီး ပြောနေကြတယ်။
ဟို….တစ်ယောက်ကျန်သေးတယ်။ လှည်းကူးက အဘွားကြီးကပြောတယ်။ ဟိုအခြောက်လိုလို နှစ်ဘတ်ချွှန်လိုလို တစ်ယောက်လည်း မဲ လိုချင်တုန်းကတော့ မျက်နှာကိုဖြီးနေတာပဲတဲ့။ မဲလည်းနိုင်ပြီး သြစီကလည်း ပြန်လာရော စောက်ချိူးက အရင်ကနဲ့ မတူဘူးတဲ့ဗျာ။ ကောင်းရော။
သူတို့ လိုချင်တာက စားဝတ်နေရေးကို အဓိကပြေလည်စေချင်တယ်။ ဒါ့ကြောင့် အန်အယ်ဒီက အမတ်တွေသူတို့ အတွက် နိုင်ငံခြားထွက်ကြတာဖြစ်မယ်။
ဦးသိန်းစိန်ရေ…ကျနော်တို့ ကိုလည်းတစ်ချက်လောက်လှည့်ကြည့်ပါအုံးဗျာ။ ကိုယ့်နိုင်ငံကို ပြန်ဖို့ အတွက် ဗီဇာလျှောက်တာတောင် မပေးကြဘူး။ ကျနော်တို့ နိုင်ငံခြားက လူတွေက မြန်မာတွေပါဗျာ။ ငပိရည်စားပြီးကြီးလာတာပါ။ ကျနော်တို့ က ခင်ဗျားတို့ သေနတ်နဲ့ မပစ်ရဲတဲ့ ကုလားတွေလည်း မဟုတ်ပါဘူး။ ကျနော်တို့ တိုင်းရင်းသားအဖြစ်လည်းမတောင်းပါဘူး။ နယ်မြေလည်းမလုပါဘူး။ ကုန်ကုန်ပြောရရင် မြန်မာပြည်မှာ လာပြီး ဆန္ဒလည်းမပြချင်ပါဘူး။ အလုပ်ရှုပ်လို့ ပါ။ လိုချင်တာတစ်ခုက ကိုယ့်မြေကိုယ့်ရေမှာ ဘုရားတွေလည်း ဖူးချင်၊ လိပ်ဥချောချောတွေလည်း တူးချင်လို့ ပါဗျာ။ ဘုန်းကြီးတွေကိုတော့ မလှူချင်ပါဘူး။
အခုတော့ဗျာ ဆိုက်ရောက်ဗီဇာကို ပေးလိုက်တာများ အရမ်းကိုတော်တယ်လို့ ပြောရမယ်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေ စီးပွားရေးလုပ်ချင်သူတွေပဲ ပေးတယ်ဆိုတော့ တော်တော်တရားတာပဲ။ ခင်ဗျားတို့ ပြောနေတဲ့ နိုင်ငံရေးကလည်း တမျိူးကြီးပါလား။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောတယ်။ နောက်တစ်ခါ မဲ့ဆောက်ကိုလာရင် အတိုက်အခံအဖွဲ့ တွေနဲ့ အရက်အတူတူ သောက်မယ်တဲ့။ အခုတစ်ခေါက်တော့ မဲ့ဆောက်က အသည်းခြောက်နေတဲ့ လူတွေနဲ့ စကားပြောရင် အရက်စော်နံမှာစိုးလို့ လာမတွေ့ နိုင်တာကို ခွင့်လွှတ်ပါတဲ့။ မနေ့ က ကျနော်နဲ့ လေယျာဉ်ပေါ်မှာဆုံတုန်းက ပြောလိုက်ပါတယ်။ ခင်ဗျားတို့ ကို သူက အသိအမှတ်ပြုပါတယ်။ သူပြောတာက ထိုင်းကလူတွေက လေတော့ အတော်ကောင်းတယ်ဆိုပဲ။ သူက အဲလိုအသိအမှတ်ပြုတယ်။ ပရိုပိုဆယ်ရေးတာများ မျက်စိတောင်မှိတ်ပြီး ရေးနိုင်းတယ်ဆိုပဲ။ သူနဲ့ တွေ့ တဲ့ အဖြူတွေက ခင်ဗျားတို့ လိမ်တာကို လိမ်မှန်းသိသိကြီးနဲ့ ခံရလို့ ရှက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း ဒေါ်စုကို မျက်ရည်စက်လတ်နဲ့ တိုင်ကြသတဲ့။ ကျနော်ကတော့ ဒီလို ဆုတောင်းပေးချင်ပါတယ်။ ဟင်္သာတ ထွန်းရင် သီးချင်ထဲကလို တနယ်တကျေးမှာ လိမ်မာစမ်းပါသားရေဆိုပြီးတော့…။
အခုတော့ ကျနော်တို့ ရဲ့ အတိုက်အခံခေါင်းဆောင်ကြီး၊ တွေ့ ဆုံဆွေးနွေးရေးနဲ့ အကြမ်းမဖတ်တဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီး နိုဘယ်ဆုပိုင်ရှင်ကြီး စတဲ့ကြီးတွေများစွာကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီး ဥရောပမှာ ဟန်ဂရီးဂျက်၊ မက်ဒေါနာ နဲ့ကေအက်ဖ်စီ စားပြီး ကိုကာကိုလာသောက်ပါတော့မယ်။ နှစ်ပေါင်း ၂၄-နှစ် တောင် မစားရဘူးဆိုတော့။ နှစ်ပေါင်းများစွာအတွင်းမှာ တွေ့ ဆုံဆွေးနွေးရေးတောင်းရတာ အာခြောက်လို့ ကိုကာလာသောက်ပြီး အပန်းဖြေနေပါပြီဗျာ။
၀င်ခွင့်မရတာနဲ့ ပဲ အကုန် ပတ်ပြီး ရမ်းတော့တာပဲ
ဟိုသီချင်းလေးလဲ မမေ့နဲ့ ..
အူးလေး လုပ်မှဘဲ ကောင်းတဲ့လူကို မရှိတော့ဘူး …။
အူးလေး ပဲ သမ္မတ ပြန်လာလုပ်ပါလား ဟင်င်င်င်င်င်…..။
ဟိုတခါ ပေါ်လက်တစ် ကို အပျော်တမ်း ဆိုလား အပြင်းပြေ
ဆိုလား …လိုက်စားနေတယ် ဆိုလို့ပါ …
ဟေ့လူ ဟေါလူ ခင်ဗျားပြောတာ အမှန်တစ်ဝက် အမှားတစ်ဝက်ဖြစ်နေတယ်….
ကိုစိန်သိရဲ့ နိုင်ငံတော် သမ္မတအကြံပေးလာလုပ်ကြည့်ပါလား။ကျုပ်တို.နိုင်ငံဂျီးတော်တော်
ကြီးပွားတိုးတတ်မှာကျိန်းသေတယ်။ဂယ်ပါပဲ လေတာပေ့ါလို. 8-)
ခုလဲ ရိုဟင်ဂျာတွေက အမေစုကို အသနားခံစာလေးတင်ပြီး ငိုပြကြတယ်ဆိုလား…………ကြားတာပဲ
ဟုတ် ၊ မဟုတ် မသိဘူး……….၀င်ဖွကြည့်တာ။
မြှောက်ပေးပါတယ်ခင်ဗျား ကောင်းပါတယ် သေသွားရင်ပိုကောင်းပါတယ်ခင်ဗျား။
ဟုတ်ပ..ဒီလောက်ဝေဖန်နေရင်၊တတ်နေရင်လည်း ဒီမှာပဲ နိုင်ငံလာအုပ်ချုပ်ပြီး တိုင်းပြည်ကောင်းစားအောင်
လုပ်ပေးပါဦး ။ လေကန်ရေးနဲ့ဝေဖန်ရေးကတော့ very very good ပဲနော်။
့မီးရှို့ရဲပါဘူးဗျာ။ ခင်ဗျားကြီးပြန်လာမှပဲရှို့ကြည့်။ မတော် ကိုယ်ရှို့တဲ့အလှည့်မှပစ်ရင် ဒွတ်ခ။ လူကိုလာပြီး မြောက်ပေးမနေနဲ့ ကဘုန်းကျော်
Hi.. Bloody ဘုန်းကျော်ကွ… လုပ်စမ်းဘာ…။
လူဟားကတော့ ဘုန်းကျော် ပြောချင်တာပြော အော်ချင်ရာအော် … လက်မထောင်တယ်ကွာ..။
ဟုတ်သော်ရှိ မဟုတ်သော်ရှိ ခင်ဗျားကြီးရေးတဲ့ ပို့စ် ဆိုရင် မဖတ်ကြည့်ဘဲကို မနေနိုင်ဘူး..။
ခင်ဗျားကြီးရဲ့ အတွေးအခေါ်အမြော်အမြင်ကို စူးစမ်းချင်တာက ၂၀%.. ပြီးတော့ အဲဒီအောက်ဆီက comments တွေဆီမှာတော့ ၈၀% ..။ အဲဒီလို ခွဲခြားယူလိုက်မယ်ဗျာ..။
ကိုဘုန်းကျော်ရေ … ရှင့်မလဲ .. ဟုတ်မလိုလိုနဲ့ . ဘယ်နှယ့် အဖျားရှူးသွားရတာတုန်း … ။
စဖတ်တုန်းကတော့ ပြည်ပနေပေမယ့် .. ဒီလူ နိုင်ငံချစ်စိတ်တော့ ရှိသားပေါ့… အမျိုးထိတော့ .. မချိအောင်နာတယ် ..ဘာဖြစ်တယ် ညာဖြစ်တယ်နဲ့ အမှတ်တွေပေးနေလိုက်တာ …… ။
အောက်ဆုံးကျမှ အမေစု လွတ်လပ်ခွင့်ရတာကို မကျေနပ်မှန်း သိတော့တယ် … ။
ကိုဘုန်းကျော်ရယ် … နှစ်ပေါင်း20ကျော်တိုင် နေအိမ်အကျယ်ချုပ်ချခံထားရသူတစ်ယောက်ရဲ့ ဆာလောင်မှုက …… စား၇တဲ့ကလေး ပိုငတ်တဲ့ ဆာလောင်မှုမျိုးနဲ့တာ့ မတူဘူးနော် ….. မြိုသိပ်နိုင်စွမ်းကြီးတယ်…. ။ ဒါလေးသတိရပါဦး ။ အမေစုက .. အခုချိန်မှာမှ သွားနိုင်လာနိုင်တာပါ … ဒါတောင် သူက လက်ခါခြေခါသွားတာ မဟုတ်ဘူးနော် .. သွားရင်းလာရင်း… အကျိုးရှိအောင် လုပ်နိုင်ခဲ့တယ် … ။သံတမန်ဆက်ဆံရေးကောင်းအောင်လုပ်နိုင်ခဲ့တယ် … ။ ဒီလို လူမျိုးအတွက် … .ကိုယ်ပိုင်လွတ်လပ်ချိန်လေးတော့ ပေးသင့်ပါတယ် ….. ။
လူထုရဲ့ ခေါင်းဆောင်ဆိုတာ လွယ်လွယ်ဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးလေ ။ မတစ်ရာသားတွေရဲ့ … ထောက်ခံမှုကို ရအောင် ယူနိုင်ခဲ့တဲ့ အမေစုလို လူမျိုး ဒီနိုင်မှာတောင် လက်ချိုးရှာလို့ လွယ်ပါ့ မလား … ။
ကိုယ့်လူက ချစ်ဆရာကြီးနော်…. ဦးနောက်နဲ. ပါးစပ်… ကြည့်ရတာ.. ပါးစပ်ကပိုအလုပ်လုပ်တယ်ထင်တယ် ထင်ရာရေး မြင်သလောက်ပြော နဲ.ဖတ်ကောင်းသဗျ…. အူးလေး…. ကလားနဲ.ရခီးနောက်မှသေ မယ်..
အူးလေး ကားမောင်းတာကြည့်မောင်း ဦးနောက်နဲ.ဆင်ခြင်ပြီမောင်း.. ပါးစပ်နဲ.မောင်းရင် တော်ကြာချစ်စရာလေးတွေကို ကောင်းမွေဆိုးမွေမပေးနုိင်ပဲနေမယ်…
Appreciate! Ma Etone!
ကိုဖုန်းကျော်လည်း ဆက်ပြော။။။ ဟဲဟဲ။။။ နောက် တာနော်။။။ ပြောရဘူး။။။ အမေစု ကို ! ကျန်တာပြောချင်ပြော !
အစ်ကိုက ပြောချင်တာနဲ့ ပြချင်တာ နည်းနည်းများ ထွေးနေမလားလို့ …
ဆိုလိုတာက thinking ထက် presentation မကောင်းတာပါ လေးစားပါတယ်ရှင်
ဘ၀စုံရင် အတွေအကြုံ ပိုစုံသမို့ တဘ၀ထဲမှာဘဲ ဖက်တွယ်ပီး လေတိုက်နေတဲ့ သူတွေစာရင် ပိုလေးစားမြတ်နိူးပါတယ်
ရန်ကုန်ရောက်ရင် ပြောနော် သမီးနဲ့အစ်ကို ဟော်တယ်တခုခုမှာ အေးအေးဆေးဆေး ဆွေးနွေးချင်ပါတယ်…
ပြောရင်း စိတ်က ဖောက်လာဘီ အာဟိ
ကိုဘုန်းကျော် ရေ ရှင်ကတော့ နာမည်နဲ့လိုက်အောင် ဘုန်းကျော်ပါပေတယ်။ ရှင်ရေးတဲ့ စာတွေ ဆို ကွန်းမန့်သာ မပေးဖြစ်တာ ။ အကုန်တော့ ၀င်ဖတ်ဖြစ်တယ်။ မဖတ်ပဲ မနေနိုင်အောင်ကို ရေးတတ်လွန်းလို့။
စိတ်ရင်းကောင်းပြီး အပြောမတတ်တော့ ဆဲသလိုဖြစ်နေပြီ တကယ်ပါပဲ ။
ဟဟ .. ငါမှုးပြီးရေးလိုက်တာ လို့ များတွေးနေမလားမသိ … :grin:
ကာလားနော.. ဆောင့်ကျိနေပါဒယ်.. အခုနော်… ခင်ဗြားဒို့တဒွေ.. ဘီးဘီစီးလဲဆဲဒယ်။ ဗီးအိုအေလည်းဆဲဒယ်။ စီးအန်အန်လည်းဆဲဒယ်..ရှိဒမျ နိုင်ဂံဂျားမီးဒီယားတွေနော်.. ဆဲဒယ် ဂျောင်းဒါးဂေါင်းဆောင် ဂိုးမြအေးလည်းအဆဲခံရဒယ်။ သူ့ဒမီးလည်းအဆဲဂံရဒယ်။ ဒေါအောင်ဇန်းစူးဂျီနော.. ဘားမှမလုပ်ပေးဘူးဆိုဘီး အဆဲခံရဒယ်။ ဂင်ဗြားဒို့ ဘားကောင်းလည်း ကားလားလည်းဆဲဒယ်။ မွတ်ဇလင်လည်းဆဲဒယ်။ တရုတ်လည်းဆဲဒယ်.. ရခိုင်းလည်းဆဲဒယ်။ အဂျင်းဂျင်းလည်း ဆဲဒယ် လေဒဲးကနေနော်.. “သတ်သတ်”လို့မြှောက်ပေးဒယ်။ ကိုးတိုင်နော.. ကွန်းပျူးတာရှေ့မှာထိုင်းပြီးရေးသောက်နေဒယ် ဘားကောင်းလည်း… :?
မှတ်ချက် – ဖေ့စာအုပ် မှ ပြန်လည်တွေ့ရှိသော ခရက်ဒစ်မပါ အလွဲသုံးစား လုပ်ခံထားရသည့်
“ကျွန်မ တို့ ရွာသူကြီး” ၏ မှတ်ချက် ကို ကော်ပီကူးလိုက်ခြင်း ဖြစ်ပါ၏။
သူကြီး ရဲ့ မှတ်ချက် လဲ အတော်ပေါ်ပြူလာ ဖြစ်သွားပုံရတယ်။
ဒါမှ မဟုတ် သူကြီးက များ သူတို့ဆီက ကော်ပီလာတာလား။ ;-)